के हो त सत्य , कान्तिपुर टेलिभिजनबाट नै सत्य आओस::mirmireonline.com
के हो त सत्य , कान्तिपुर टेलिभिजनबाट नै सत्य आओस
धेरै बुवा आमाहरुले त्यो अन्तरबार्ता हेर्नु भो , आँखा भरी आसुँलिदै यस्तै हुने भए छोरा छोरी किन जन्माउनु भनेर प्रश्न गर्नु ? मलाई पनि लाग्यो ( यती सम्म क्रुर र दयाहिन मान्छे पनि हुन्छन । मैले आफुले आँफैलाई प्रश्न गरिरहे । सामाजिक सन्जालहरुमा त्यो परिवार प्रती गालीको बर्षात हुन थाल्यो र चर्चाको सिखर नै चुम्यो । अन्तत , सत्य लुक्दैन र हत्केलाले सुर्य छेकिदैन , यो घटना पर्दाफास भो ।
बिना आधार बिना प्रमाण कसैको पारिवारिक जीबनलाई खत्तम पर्दा कानुनको कुरा आउँदैन जब हामी सामान्य नागरिकले गाली गर्न थालछौ तब कानुन ? कन्चन प्रकरणमा सबै दोशी छन । एउटा परिवारलाई सराप्न लगाएर के देखाउन खोजिएको हो । करोडौ नेपालीले सत्य नबुझी गाली गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने मिडिया हो कि होइन ? गलत सुचनाको प्रवाहले त्यो परिवारमा परेको मनशिक पिडा के माफि योग्य छ ? राष्ट्रको एउटा जिम्मेबार मिडियाले एस्तो झुटो प्रचार गर्दा हामीले पनि जे गरिदिय पनि भयो नि ? प्रश्न जिम्मेबारिता को हो । एनजीओ र डलरबादीहरु पनि माफि योग्य छैनन । सातौ बर्ष फोहोरको डङुरमा बसेको भनेर कन्चनले अन्तर्वाता दिदा मलाई सोध्न मन लाग्यो । एन जि ओ हरु त धेरै छन आज बल्ल किन उद्दार भो ? कन्चनलाई स्याहर सुसार गर्नु पर्थ्यो त्यो राज्यको दाइत्वो हो , सरकारले सकेन संस्थाले र्गयो धन्यवाद । तर एउटा संस्थाको लोकप्रियताको लागि एउटा परिवार माथि राजनीति गर्नु अन्यापूर्ण हुन्छ । हामी अरुको नैतीकता मनबता र सम्बेदनशीलताको ख्याल नगर्ने अनी अरुले हामीलाई गाली गरे भनेर रोदन पोख्ने ? कन्चन प्रकरण डलरबादी माफियाहरुको एउटा सुनियोजित योजना हो । आमा बाबु र छोरा छोरी बिचको सम्बन्ध भावनात्मक हुन्छ , नेपाली समाजमा बिशेस महत्वो राख्ने बिषय हो यो ? यो प्रकरण नेपाली समाजको सामाजिक सम्रचना धोस्त पार्न र हाम्रो भावना कमजोर बनाउनका लागि परेको देखिन्छ । हामी नेपालीको भावना कती बलियो रहेछ त्यो सबैको अगाडि खुलिसकेको छ । हामीले यो समाचार सुनिसकेपछी एकोहोरो बुझाई बनाएर सक्दो गाली गरेउ किनकी हामी पुर्बिय अध्यात्मबाद बाट प्रभाबित छौ र हाम्रो समाज र सामाजिक सम्रचना तेस्तै अनुरुप निर्माण भएको छ । हो, एउटा नागरिकले बाँच्न पाउनु पर्छ र उसलाई बाचाउनु हाम्रो मानबियता हो तर यही मानबियताको फाईदा उठाएर राजनीति गर्नु कतिको जायज हो ? झुटका पर्दाहरु उघारिदै छन , मेरो प्रश्न यो प्रकरणमा समाबेश मान्छेहरुको नैतीकतामा हो ?
समाज सेवा पवित्र भावनाका साथ मानब जातीको हित सोचेर गरिन्छ र त्यो गर्नु पर्छ । आज समाज सेवाका नाममा धेरै संस्थाहरु खुलेका छन र चर्चामा आउन बिभिन्न हथकन्डा श्रीजना गर्दछन भन्ने यो एउटा नमुना उदाहरण हो । मलाई खुशी यस अर्थमा लाग्यो कि एउटा बुढी आमा लाई गजल भन्न सम्म सिकाएर प्रस्तुत गरेछन । यसका लागि धन्यवाद । यो प्रकरणमा समाबेश सबैलाई । हुन ,त हामी गरीब देशमा हुर्केको हुनाले हाम्रो बुद्दी र चेतना जती सुकै भए पनि गलत र सही छुत्टाउन नसकेर यस्तो निच राजनीति गर्छौ ।
राष्ट्रको प्रतिष्ठित टेलिभिजन र पत्रकारको गैर जिम्मेबारिता यसरी आयो कि राज्यको चौथो अङ अझ पनि अन्धकार मै रहेछ भन्ने अनुभुती भो ।
आम नेपाली जनता सँग माफि माग्नै पर्छ र वास्तविक सत्यातालाई बहिर ल्याउनु पर्छ । ब्यक्तिगत रिस साध्न यो सुनियोजित योजना भए मेरो भन्नु केही छैन तर के यो प्रब्रित्तीले फेरी आर्को निर्दोश ब्यक्तीको जीबन बर्बाद हुँदैन भन्ने प्रमाण के ? परिवारको मिलनका निम्ती हाम्रो सामाजिक सेवा केन्द्रित हुने हो कि बिग्रहका निम्ती , मेरो प्रश्न समाजसेवीहरु लाई ? कमजोर राज्य हुँदा थर्ड ग्रडेका मान्छेहरुले हाम्रो सामाजिक सन्तुलन माथि प्रहार गरिरहन्छन । कतै यस्तै त होइन यो प्रकरण ? सरकारले यो प्रकरणको गम्भिर अध्ययन गर्दै दोशी माथि कारबाही गरोश । अन्यथा
यहाँ जसले जसलाई जे भन्दा पनि छुट दिनु पर्छ कि ? कानुनी शासनमा जो कोही पनि भागीदार हुनु पर्छ भन्ने मेरो बुझाई हो ।
प्रचण्ड कमरेड तपाईंलाई बर्गिय बिचारको धनी भनेर कसरी भन्ने?